Ngithola kanjani izindawo eziphezulu ze-backlink enegunya eliphezulu?
Ngokucabangela ukubaluleka kwama-backlink njengento ebalulekile ekudaleni ukubonakala emiphumeleni yokusesha ye-Google, umbuzo ofanele ngamasayithi angemuva we-backlink ukuxhuma kusuka nakuya. Imithombo engcono kunazo zonke ze-backlink eliphezulu eliphezulu ngamakhasi ewebhu anegunya eliphakeme lesizinda (DA), igunya lekhasi (PA), kanye nesigaba sekhasi (PR). Nazi izinsiza ezimbalwa ezisekelwe kwi-Social Media nezindawo ezingemuva ezingemuva kwe-backlink oyinconywa ukuba ucabangele ngokusekela emuva, kuqala futhi okubaluleke kakhulu: YouTube, Google Plus, Pinterest, Facebook, Twitter, LinkedIn, Wikipedia, Instagram, Slide Share, Vimeo, Reddit, Flickr, Okujabulisayo, i-Word Press, i-Quora, i-Tumblr, njll.
Yebo, laba kumele baziwa ngengxenye yezingonyama zabasebenzisa i-inthanethi yanamuhla. Ngaphezu kwalokho, empeleni yizindawo ezivakashelwa phezulu emhlabeni, akunjalo? Kodwa kuthiwani uma ngithi kukhona namanje izindawo eziningi ezinhle ukuthola ama-backlink aphezulu, ngaphandle kwalezi? Ake sibheke ngezindlela ezimbalwa ezisebenzayo ukuze uthole amanye ama-backlink aphezulu e-PR afanayo. Lezi zinhlelo ezilandelayo zivame ukunganakwa ngabanini bebhizinisi abaningi kakhulu, futhi ngisho nabaphathi bewebhu abanamakhono. Lapha kukhona: ukunikeza ubufakazi nokubuyisela izixhumanisi noma ukusebenzisa i-HARO ezindaweni eziphezulu ze-backlink nge-PR eqinile ngokusebenzelana kakhulu nezindaba.
Asikho isidingo sokuthi wonke amabhizinisi angathanda ukuba nobufakazi obuningi kusuka kumakhasimende ajabule ngangokunokwenzeka. Njengabaningi bethu, kungenzeka ukuthi usanda kujabulela umkhiqizo othile noma isevisi enkulu, akunjalo? Ngakho-ke, ucabangela ukuthumela ubufakazi, qinisekisa ukuthi umhlinzeki wenkampani uzoba nobufakazi bakho obufakwe ekhasini eliyisiqalo noma nanoma yimaphi amanye amakhasi wezocwaningo kanye nobufakazi. Ngaleyo ndlela, ngeke kudingeke ubuze i-backlink kuwebhusayithi yakho ngokubuyisela. Ngisho ukuthi uzoba nakho cishe noma yikuphi icala - ukufakazela ubufakazi bakho empeleni buvela kumuntu wangempela
Ukukhumbula kabusha kuyisisombululo esikhulu sokuthola izimpendulo ezilula sebenzisa. Phuma ukucinga noma yikuphi ukushiwo kwenkampani yakho uqobo, kanye nomkhiqizo noma isevisi yebhizinisi lakho. Iphuzu ukuthola lezo zisho ezisekhona ngaphandle kokuxhumana nabo nabo. Ngakho-ke, konke okudingayo lapha kuthumela abantu abathintekayo ezinye izikhumbuzo ze-imeyili ezinomusa nezenhlonipho ukuqinisekisa ukuthi isixhumanisi sakho senezwe ngempumelelo kumakhasi abo wewebhu. Uma kufanele ube nezinkinga ngokuthola amagama wakho webhizinisi noma igama lomkhiqizo, ngincoma ukusebenzisa amathuluzi e-Intanethi njengoBuzzSumo noma Ukushiwo. inetha.
HARO (Siza uMlobi ophumayo)
Ngenye yezindlela ezihlakaniphile zokuzuza ezixhumaneni eziningi zekhwalithi ngesisindo esiphakeme kakhulu. Eqinisweni, i-HARO ingakusiza ukuba ufinyelele kumasayithi e-backlink aphezulu asebenzelana kakhulu nezindaba. Uma usubhalisile, uzothola ama-imeyili nsuku zonke kusuka kubathatheli abahlale bedinga amaphrojekthi okubhala okusha kanye nemibono emisha efanele ebhizinisini lakho noma kubhulogi. Unganqikazi ukunikeza impendulo nge-tip ewusizo, umhlahlandlela ohambisanayo, noma ukuqonda okubalulekile. Ukwenza kanjalo, kungenzeka ukuthi uzobanjwa ngesixhumanisi ezindabeni ezithembekile noma kumawebhusayithi wezindaba Source . Umsindo omkhulu, eh?